Dr Abiy: "Abaalmarinta la i siiyey Afrika oo dhan baa leh" - BBC News Somali
Image caption Ra'isul Wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed Cali
Raisul Wsaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa sheegay abaalmarinta nabadda ee Nobel ee la guddoonsiiyey uu keligii lahayn oo ay leedahay qaaraddan Afrika oo dhan.
Abaalmarinta Nabadda ee la guddoonsiiyey Dr Abiy waxaa looga fal celiyey siyaabo kala duwan. Goobaha sida gaarka ah looga dareemayey waxaa ka mid ah magaalada Abu Dubai.
Dhismayaasha waaweyn waxaa lagu sharraxay calanka dalka Itoobiya oo xalay oo dhan laga dheehanayey dhismayaasha intooda badan waxaa sida oo kale meela badan la suray sawirka Amiirka Imaaradka Carabta Amiir Maxamed bin Zayed iyo Ra'isul Wasaare Dr Abiy Axmed. Wuxuuna amiirka boggiisa Tweetarka soo dhigay farriin hambalya ah oo afka Amxaariga ku qoran.
Lahaanshaha sawirka AMBASSADOR SULEYMAN DADAFO
Farrinta hambalyada uu Amiir Maxamed bin Zayid uu u diray Dr Abiy waxay u akhrismeysaa sidan: "Saaxibkeey Ra'isul wasaare Dr Abiy Axmed Abaalmarinta nabadda ee Nobel uu ku guuleystay aad baan ugu faraxsanahay. Ra'isulwasaaruhuna rajada nabadda uu gobolka ka dhaliyey abaalmarintaasi waa uu mudan yahay".
Dr Abiy Axmed waa qofka 12-aad oo qaaraddan Afrika ka soo jeeda oo Abid ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel.
Abaalmarintan oo marki 100-aad la bixiyey waxaa ilaa iyo hadda ku guuleystay 107 qof iyo 27 hay'adood.
Haddaba dadka qaaraddan Afrika u dhashay ee horay ugu guuleystay abaalmarinta nabadda waxay kala yihiin:
2008 - Denis Mukwege - Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo
2015 - 2015 Nashnay Dialog Quartet - Tunisiya
2011 - Alen Johnson Sarlif - iyo Leimah Gibowi - Liberia
2005 - Maxamed al-Baraadici -Masar
2004 - Wangari Matai - Kenya
2001 - Kofi Anan - Ghana
1993 - Nelson Mandela iyo FW Diclark - Koonfur Afrika
1984 - Dezmond Tutu - Koonfur Afrika
1978 - Anwar al-saadaat - Masar
1960 - Albert Lutuli - Koonfur Afrika
Dr Abiy Axmed Cali Muxuu ku mutuestay Abaalmarintaasi?
Guddiga Norway ee u qaabilsan abaalmarinta Nobel-ka ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen ku sheegay in Abiy Axmed uu ku muteystay "nabadda uu la galay dalka ay collaada mudada kala dhexeysay ee Eritrea".
" Nabadda kama timaada hal dhinac oo kali ah. Markii uu Abiy Axmed gacan nabadeed fidiyay, madaxweynaha Eritrea ayaa isagana ka soo jawaabay doorna ka qaatay in heshiis nabadeed oo rasmi ah ay labda dal kala saxiixdaan".